နိုင်ငံတကာသတင်း – Na Pann San
လက်ဘနွံနိုင်ငံ ဟာ ” Failed State” အဖြ စ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင် မလား…?
သြ ဂုတ် လ ၄ ရက်နေ့ အမိုနီယံ နိုက်ထရိတ် တန်ချိန် ၂၇၅၀ တန် ပေါက်ကွဲ မှု့ ဖြစ်စဉ်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် မှာ လက်ဘနွံ ဝန်ကြီးတွေ တစ် ဦးပြီး တစ်ဦးနုတ် ထွက်မှု့တွေ လုပ် ခဲ့ကြပြီးနောက် မှာ မနေ့ တုန်း ကတော့ ဝန်ကြီးချုပ်
အမေရိ ကန်ပြည်ထောင် စု မှာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ရွေး ကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကာကွယ်ဆေး ရနိုင် ခြေရှိနေတယ် လို့ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် က ကြာသပတေး နေ့မှာ ပြော ပါ တယ် ။ ဒါဟာ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော် ရဲ့ ကျန်းမာရေး
Na Pann San W | July 29, 2020
“နိုင်ငံရေး က ပါးနပ် ရတယ် … ပါးနပ်လေလေ အောင်မြင်လေလေ ပဲ ။ ” ပါးနပ်တယ် ဆိုတာ အခြေအနေ အချိန် အခါ ကို ကြည့်ပြီး လှုပ်ရှား တတ်တာ ကို ခေါ်တာ ။ မလိုအပ် တဲ့ အချိန် မှာ ကြောင်လက် သည်း
သာကော နဂါးကြီး မှ တီကောင် ဘဝ သို့ ပြောင်းလာနေခြင်း နှင့် ပဲလှော်ကြား စားညပ်လာမယ့် တရုတ်အားကိုး ပုဆိန်ရိုးများ
Na Pann San W | July 26, 2020
တရုတ် နဂါးကြီး တီကောင်ဘဝ သို့ ပြောင်းလာနေခြင်း …. ၁၉၇၀ ခုနှစ် က လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ GDP သာသာ ဒေါ်လာ( 90 ) ဘီလျံပဲ ရှိ ခဲ့ တဲ့ တရုတ်ဟာ နှစ်ပေါင်း ( ၃၀ ) ကျော် ဒီကနေ့ မှာ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး စစ်ဖက်ဂြိုဟ်တု ကို အမေရိကန် လွှတ်တင်ပေးပြီး မဟာမိတ် စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြလိုက်ပြီ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ Space X က အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်ပေးခဲ့သည်ဟု တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါ ကိပ်ကနေဗာရယ်လေတပ်စခန်းကနေ လွှတ်တင်ပေးလိုက် တဲ့ ဒီဂြိုဟ်တု က နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင် တဲ့
စက္ကန့် ( ၆၀ ) အတွင်းမှာပဲ လူ ( ၇၁ ) ဦးကို ကိုဗစ် ကူးစက်စေ ခဲ့တဲ့ Silence Carrier အမျိုးသမီး
Na Pann San W | July 18, 2020
နိုင်ငံခြား က ပြန်လာ ခဲ့ တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာပြသ ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရကာ လူပေါင်း ၇၁ ယောက် အထိ ကူးစက်မှု ရဲ့ လူနာ အမှတ် – ၀ အဖြစ် ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ် ပါ တယ် ။ အမေရိကန်ရောဂါ
အမေရိကန် စစ်သဘောင်္တစ်စင်း ထူးဆန်းစွာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲ ၊ အကြောင်းရင်းမသိရသေး…( ရုပ်သံပါ )
Na Pann San W | July 13, 2020
အေ မရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဒီယေဂိုမြို့ ရှိ ရေတပ် အခြေစိုက် စခန်း တစ်ခုက သင်္ဘော တစ်စီးပေါ် မှာ အခုလ( ၁၂ ) ရက် မနက်ပိုင်း က မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ခဲ့တာကြောင့် လူ(၂၁) ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ် လို့ အမေရိကန်ရေ တပ်အာဏာ ပိုင်တွေက ထုတ်ပြန်ပြောဆို
တစ်တော့ အပါအဝင် တရုတ် လူမှုကွန်ယက် apps များအားလုံးကို အမေရိကန်တွင် လုံးဝသုံးမရအောင် ပိတ်ပင် တားမြစ်မည်
Na Pann San W | July 7, 2020
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mike Pompeo မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ သည် TikTok အပါအဝင် တရုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ apps များ ကို ပိတ်ပင်တားမြစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ ညပိုင်း က ပြောကြား ခဲ့ သည် ။ Fox News
Na Pann San W | July 3, 2020
တ ရုတ်နိုင်ငံမှာ ဝက်တုပ်ကွေး ပိုးသစ် တစ်မျိုး တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ် ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ က genotype4လို့ အမည်ပေး ထားပြီး၊ G4 လို့လည်း အလွယ်ခေါ်ကြ ပါတယ်။ G4 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ( ၂၀၀၉ )ခုနှစ် က
ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ ( သို့ ) လုပ်ရက်တိုင်းက ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးဖို့သာဖြစ်နေတဲ့ တရုကွန်မြူနစ် ဇာတ်ရုပ်
Na Pann San W | July 2, 2020
ဇူ လိုင် (၁) ရက်နေ့ သည် ဟောင်ကောင်အား ဗြိတိသျှ တို့ မှ တရုတ် လက်အောက် သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည် မှာ ၂၃ နှစ် ပြည့် မွေးနေ့လည်း ဖြစ်သည် ။ တချိန်တည်းတွင် ပင် ထိုနေ့ သည် ဟောင်ကောင်ပြည်သူများ ၏ ကိုယ်ပိုင်